Kukholakala ukuthi ukukopela njengoba kepha wesabeka njengezimpi ukufa. Kusukela ngesikhathi ezafika ngaso wakhe afe imizwa engcono ukuthembana, okukhululekile, ukwethembeka. Ezimweni eziningi, baya kude phakade, futhi kuyinto engenakwenzeka ukuba bavuselwe, efana ngesidumbu. Ikakhulukazi ebabayo kuba ukulahlekelwa irretrievable ukwethenjwa. Futhi bayaqhubeka ubudlelwane egcwele phakathi kwendoda nowesifazane akunakwenzeka ngaphandle kwalo. Ngeshwa, lokhu akulona kuqondwe abantu abanquma ukuthi yini namacala okuvukela umbuso ngoba ukuvukela umbuso - ukhetho best sendlela ajezise imbuka. Esikhathini ukushisa imizwelo ngokuvamile benza izinqumo ukuqubuka ukuthi babhebhethekisa lesi simo esinzima kakade.
Ngugobe ngoba umbuso. Ukwaneliseka noma isijeziso fair?
Ngakho noma akufanele abe njengesosha okunguye owaqala uzibophezele amambuka futhi nginomuzwa wokuthi kudlalwa ngami? Kasibili bonke ochwepheshe emkhakheni ubudlelwane obufanele, kanye zokusebenza kwengqondo zithi - akukho.
Kungani, ngokombono wabo nokucekela ngoba ekhaphela akwamukelekile ubuhlobo, ngisho noma sekuvele omunye wabo waqothula thusa njengoba ukungathembeki komuntu oshade naye? Ngoba - umgaqo ndawo, umgaqo ndawo. Phela, eqinisweni, kuba umbuzo yokuziphindiselela, okuyinto kufanele elihlobene ne-umgodi, ngaphezu kwakho konke, Omba umphindiseli lalo. Kuyathakazelisa ukuthi cishe bonke abantu ngemva ukuziphindiselela esinjalo impumuzo wamukelekile, ngisho ngizisole ngalokho ayekwenzile.
Ingabe namuhla kakade kwenzeka kaningi. Nakuba ukukhashelwa ngaphambili kwaba "kungumsebenzi" amadoda kuphela. inkululeko ngokocansi, ukuphula ngemibono, futhi izitembu kulahliwe kwaholela yokuthi ukungathembeki besifazane baba okufanayo mkhuba "okuvamile," kanye amadoda.
Ngakho, emkhayeni kukhona into encane ezimbi: indoda ithola ukuthi umkakhe ukukopela kuye futhi kwase kushintshile esisodwa. It is kahle eqinisweni kwaziwe ukuthi amadoda azibonayo a libukhali ukukhashelwa enjalo, ngoba kuthinta yabo ukuzethemba kanye ukuzazisa besilisa. Izinto bayahamba ke wonke umuntu ngendlela ehlukile. Omunye Iqoqa izinto futhi ushiya indlu noma ubeka imbuka aphume kuye. Enye ezisengozini ukufaka isehlukaniso, kanti eyesithathu ongathethelela (lokhu futhi akuyona into engavamile). Kukhona esinye isigaba babayeni ukukhohliswa - labo abanquma nomphindiseli. Lokho - okuvukela uMbuso ngoba umbuso. Ngokusho kwabo, lokhu kuyiqiniso futhi kubeka zombili ku-nokuwumisa alinganayo - akekho uzizwa lophetse futhi ngaphoxeka.
Ngubani ngeke ushintshe umkakho - ke akubalulekile kangako. Into esemqoka ukuthi oshade naye wayazi abashise, ukumenza ahlupheke futhi ahlupheke, njengoba kwakunjalo c umyeni wakhe. Ngokuvamile Amadoda anjalo wakhetha abangane, odadewabo noma nengangibajwayele ezivamile naye, ukwenza kube nzima nakakhulu.
Ujeziselwa ukuvukela umbuso
Uchaza umyeni isenzo ngokwayo, umngane wakho noma umkakho, uma ngaleso sikhathi namanje silondoloze ubuhlobo. Nakuba ngokuvamile kakhulu emva izenzakalo ezinjalo ukuhlala ndawonye akunakwenzeka.
Futhi yeka umthwalo umuntu azizwa? Ingabe azizwa sengathi ukwaneliseka futhi wathola impumuzo? Abaningi babo bayavuma ukuthi asamukelanga ngenxa kwenzekani. Kunalokho, ngemva isenzo kanembeza obuhlungu, yaba umuzwa zinyanyise. Siba nomuzwa ukuhlazeka nokudelela kusukela ukukhashelwa umkakhe ngakho kuphi hhayi usehambile ... Kodwa kubalulekile ukuba ngandlela-thile ajezise ukukhashelwa umkayo? Isijeziso ingaba yinye kuphela - intethelelo.
umyeni ukuvukela umbuso
Kwenzeka isimanga emphakathini wethu ukuthi owesilisa isithembu - lomkhuba kuvamile futhi uyamukeleka wonke amalungu alo. Iqiniso lokuthi indoda eshadile eshintsha - lokhu kungokwemvelo, abanye ngisho vumela sokuphinga. Ake nezinsuku lapho singeke sikhulume ezimweni lapho naye uphila "kabili" ukuphila: a "parallel" eziyisikhombisa, noma intombi eseceleni unomphela. Lapha mayelana nanoma yisiphi uthando nokuzinikela umfazi esisemthethweni asikwazi hamba kanye ngemizwa yabanye abantu.
Kwenzeka isimanga ngoba nomkakhe befunda zokungethembeki umyeni wakhe. Lokhu kungase kwenzeke ngengozi noma yena ngokwakhe wavuma-ke. On unkosikazi indlela yokuthi ukukhashelwa yaziwa, kakhulu kuncike. Ngokwesibonelo, uma indoda bazama konke abangakwenza ukuze ufihle hhayi avumela umkakhe ukwazi ukuzidela kwakhe, cishe uphatheke kabi ngenxa yokwesaba kwakhe, intukuthelo. Ngelilodwa nje, wayengeke ubuhlungu.
Enye into, uma imbuka wanquma ukuba avume konke. Ngakho noma ufuna ukushiya nomkakhe, noma kufika njengoba uyindoda ethembekile futhi amanani kakhulu ubudlelwane nomkakhe. Phela, uyaqaphela ukuthi phakathi amabili abantu ngothando hhayi kungaba izimfihlo kanye namanga.
Shintsha umyeni wami emuva noma cha?
Ukwenza lokhu futhi Stoi kungakhathaliseki nabo futhi kungani umyeni esishintshile. owesifazane Wacasuka uyakwazi kakhulu ngenxa imizwelo yabo, kodwa ngeke ukuxazulula inkinga.
Unkosikazi uthatha yokuziphindiselela ukuze akhaphele futhi wanquma ukwenza okufanayo. Kuyinto ngesenzo sakhe izaba, ngoba ku ukubaluleka nokuqukethwe okulingana yokuthi umyeni wayo alamukela. Yini isinqumo lona wesifazane? It has ukunikela ubulili umuntu kusuka abangane, esisebenza nabo noma yebo umuntu ongaziwa nabo bangaphambi ukuhlangabezana ngokuqondile ibha. Yebo, uyothola isinxephezelo yabo futhi mhlawumbe uzizwa nokuqhosha yokuziphindiselela ukuze akhaphele. Kodwa ukwaneliseka kokuziphatha nokungokomoya isenzo esinjalo ngeke nanini bakulethe.
Kungani sifuna okuziphindiselela
Abantu abaphila ngesikhathi ukushaqeka komuntu oshade naye, awazi ukuthi baziphathe kanjani esimweni esinjalo. Vele akekho oyoke udlulele enjalo asifaneleki - ithemba lonke lokuthi Sia inkomishi ebuhlungu blowjob.
Lapho ukukhashelwa uwela bese ephula nje ukuphila, ambalwa kakhulu ngicabange ukuthi kudingeka kwenziwe. Phela, kumelwe ngandlela-thile uye ku, ukuya emsebenzini, ulale udle, ekugcineni, nje nhlobo. Baphenduka ku mshini ukuzivikela izinqubo ukuthi Kwakwenzeka ngokoqobo yawo, futhi kwashintsha kakhulu nge obhekwe ukuvukela umbuso.
Ngakho-ke, abaningi wadukisa abantu bese unquma ukuthi indlela engcono kakhulu kulesi simo ngabo kuyinto "impendulo" umbuso. Lize anqume abazi, abazi khumbulani nengqondo, ukuthi nje "kuvaliwe" ngesikhathi esimweni esithile ngokomzwelo. Okwamanje, kukhona ngokuphelele nezinye izindlela psyche womuntu.
Singasho ukuthi okwamanje ziye zingazi ukuthi enzani. Ukululazeka ukukhashelwa indoda ehoshiweyo ikhanda lami yesehlakalo enyanyekayo kunazo Ngugobe yingxenye yokuphakama kwalo yesibili yomunye umuntu noma yabanye. Ukuzehlukanisa futhi bazivikele lokhu okwakwenzeka, ingqondo ukuze zisize inikeza kuye kuphela "kwesokudla" indlela - ukuziphindiselela ukukhashelwa umyeni wakhe noma umfazi wakhe.
Ukukhaphela omkhulu nokulibalela kwaKho - izinto ehambisanayo
Vele womshado okungalungile can, uma ngaphambili phakathi kwala madoda amabili kwaba uthando futhi ngobuqotho imizwa uthando ukwethembana. Iqiniso lokuthi ukuvukela umbuso nokuvukela umbuso - yokungezwani. Omunye angase athi ebukhoneni imizwa enjalo hhayi kungaba ukungathembeki komuntu oshade naye ngokomthetho, kodwa akuyona. Wonk 'umuntu ufuna siphile ngenjabulo futhi afe ngosuku olulodwa, kodwa thina - abantu abangokoqobo ngezinye izikhathi ababuthakathaka.
Kodwa kungase kube ukuthi umyeni babewela izintelezi ozakwabo esilawulayo, nengangibajwayele, sekuyisikhathi eside okuyinto wayegaqele yayo isethwe kuye. Ngaphezu kwalokho, "izintaba kwesobunxele," ngokuvamile ezenzeka ngaphansi amponjwana, uhambo ibhizinisi (ekhaya), emaphathini yenkampani. Kodwa ukuthi indoda ngeke ithande umkayo kancane - ke nje kwenzeka, yena uyosebenza Akushiwo ukuthi lesi siqalekiso. Yiqiniso, Kulezo zimo ukuphendula okuvukela uMbuso ngoba ekhaphela umyeni wakhe Kungaba iphutha elikhulu, njengoba lokhu kungaholela kokufa ubudlelwano nomndeni.
Umyeni ngoba esiphendukayo ngobuqotho "ngesenzo", uyaqiniseka ukuthi lokhu akusoze kwenzeke futhi ukuthi ukuphinga kwakuyisono, iphutha elibi kakhulu futhi ingozi. Uma ecela ngimxolele emshadweni, ukuziphindiselela akulona neze. Uma unkosikazi ivuliwe kuzoqhubeka, kuyilapho abashadayo cishe belondoloza ubuhlobo babo.
Likuphi yokuziphindiselela, noma ngabe kuziwa esikhundleni
Njengoba kushiwo ngenhla, ubulili nomunye umlingani, isetshenziswa tando kuhle phindisela! Ukuze akhaphele othandekayo, lutho kodwa monakalo, self-ukwenyanya futhi imizwa yokungabi nalutho, akusebenzi. Lokhu kunjalo ikakhulukazi acute nokuzwakala kwabesifazane ababengakaze wanquma ukuthatha lesi sinyathelo.
Izibalo izifundo ezihlukahlukene eveza iqiniso ukuthi cishe yonke imindeni liphuke emva omunye enquma ukushintsha ukuze ngiphindisele imizwa yakhe wanyathelwa. Lapho ngikhaphela, kwalandela enye, bobabili namanje nethuba ukukulungisa - ukuthola ukuthi ubani okufanele asolwe nokuthi ukuqhubeka ukuhola wonke umuntu kule ngeke kwenzeke futhi.
Kungenjalo, ayeke ukubhujiswa kuyoba cishe kungenakwenzeka. Yiqiniso, zikhona imibhangqwana, ngemva izinguquko mutual awazange ayiphule ubudlelwane futhi waphila, kodwa lezi ezimbalwa kakhulu. Njengomthetho, abantu abanjalo abanalo ikusasa ndawonye. Lena kunomvuzo ngoba umbuso.
Ngakho yini noma cha okuziphindiselela ngoba awuthembekile kothandekayo wakho?
Hhayi ngisho nokuzihlupha ngoba nje ezingenanzuzo ngokomzwelo. Phela, lo muntu owakhaphela kuyilungelo zokuziphatha futhi inzuzo phezu imbuka. Lokho kubanika, ukuze silondoloze ubuhlobo kanye nomndeni uzokwenza konke ukuze asuthe. Ngamanye amazwi, ngeke "ageze icala." Lunikeza, futhi izimbali ngaphandle kwesizathu, ukuthatha uhambo, izimemo yokudlela, futhi okubaluleke kakhulu, a lot of ukunakwa nokunakekela. Lena konke indoda phuca yena, uma wena uzoyenza okuziphindiselela wenze okufanayo njengoba enye ingxenye yakhe. Okokuqala, uzibeka kuye ezingeni elifanayo (okungukuthi, kuvela ukuthi akayena ungcono kuye), kanti okwesibili, phuca yena izinzuzo ngenhla. Kodwa okubaluleke kakhulu, aqede ithuba lokuthi, ukugcina umndeni: phela lapho ukushintsha kokubili ukhona engenakwenzeka.
Ungakwazi umane ushintshe
Abantu abaningi ukubuza ukuthi kungenzeka futhi kudingekile ukuba athethelele ukukhohlisa nokukhohlisa? Nakanjani yebo, uma kuyintando nesifiso sakhe. Kufanele aphinde abhubhise ubuhlobo, uma kukhona okungenani abanye ithuba elincane ukuwalondoloza. Shono bathi ikhefu - kulula, kodwa ukwakha entsha nzima nakakhulu.
Into kuphela ongayenza - kungukuqonda nokuthethelela, kwaba kanjani kanzima. Mhlawumbe ngisho esisodwa, bese, uma ubuhlungu obuhlabayo nakho kuzodlula noma kancane imizwa. Odokotela bengqondo ukweluleka ukuthi akudingekile ukuthethelela ngokushesha, ngisho nangemva ngala mazwi: ". Ngiyaxolisa ngoba ukuvukela umbuso" kufanele ahlupheke engavumelekile (noma okungalungile), ngaqaphela ukubaluleka intethelelo. Uma kungenjalo, uma kulula ukuthola kuye, kuyoba depreciate, futhi akumangalisi ukuthi zizoshintsha kaningi. Uma kunjalo ngokushesha futhi kalula zithethelelwe okokuqala, mhlawumbe kuzobiza okwesibili?
Yiqiniso, miningi imikhaya abaye babhekana nezimo ezinje empilweni. Londoloza Ubuhlobo eyabasiza intethelelo futhi, okubaluleke kakhulu, ukuba kuvinjelwe yokukhulisa ukukhunjulwa lesi sihloko esikhathini esizayo. Abasebenzisi uyavumelana bayakhohlwa konke futhi siqhubekele on. Futhi ukuphila ngakho ngenjabulo iminyaka eminingi. Nokho, ucwaningo lubonisa ukuthi kuze kube sekupheleni ukukhohlwa le ndaba ngakho akekho umuntu ongakwenza eyodwa. Kuthatha eziningi amandla ngokwengqondo nangokomzwelo ukwenza nsuku zonke ukubona umuntu athembeke kuwe futhi ngesikhathi esifanayo ukuzama kabusha ubuhlobo bawo.
Uthando othethelela zonke
Ngiphindisele ukukhashelwa othandekayo ayisakwazi, ngoba - intandokazi. Igama elithi "ukuvukela umbuso", "Revenge" - lezi izinto azihambelani umuzwa uthando. Kuyinto engenakwenzeka ubuhlungu umuntu imigwaqo kanye abathanda. Zithi uma uthanda, ungakwazi sithethelelwe konke. Futhi kuyiqiniso, ngoba ukuqaphela yokufelwa othandekayo kakhulu sibi kakhulu kunalokho okuboniswa kokubekwa kwakhe, ukukhohlisa okukhohlisa.
Uma nje abakwazi, kungcono ukuhlukanisa. Futhi ngaphandle iconsi futhi amahlazo, ikhanda waliphakamisa. Futhi "run" embhedeni yomunye, ukuthola isinxephezelo ngenxa yokulimala kwakhe, nje akudingeki: othandekayo ukuthi is hhayi wabuya, kodwa ukuzethemba ingakulahlekela phakade. Ingabe kuwufanele it? Noma kunjalo, wonke umuntu uyazinqumela.
Umfutho womoya e accumulator: Izici futhi isimiso zedivayisi
Isikhwama okusha? Of jeans ezindala!
Ferghana esifundeni (Uzbekistan): izindawo edolobheni
Indlu Foam amabhlogo ngezandla
Sengqondo Senile (sengqondo senile) izimpawu, izimpawu, ukwelashwa
Okungamelwe ukwenze Facebook abadala self-ukuhlonipha?
Le noveli "Thina" Zamyatin: izinkinga
Kuibyshev zohlobo imvu - ukukhetha elikhulu ibhizinisi inzuzo nendlu
Kumisiwe esihlalweni umfece ngezandla zabo: isigaba master